Ngethuba lokusasa kwentwasahlobo, asiyikuvuyela ilanga nje kuphela kwaye silinde, xa iqhwa liqhaqhazela, kodwa siyazixhalabisa, sibheke kwi-cellulite, ngaphezu komzimba. Ukongeza. Ukukhathala, ukuqokelelwa ebusika akudluli, kuba ixesha lokuphumla alizange longezwe. Ukuze ubuyele kwisimo esiqhelekileyo, asithatha umgudu omkhulu kunye nexesha. Kukho iimfihlo ezininzi ezinokutshintsha imeko yakho yempilo.
Ndimele ndivume, ebusika asiyidli ngendlela engcono. Ukunqongophala kwamavithamini kudla ngokuhlawulelwa ngumlinganiselo omkhulu wokutya okuphezulu kweekhalori, ngenxa yokuba isisu sisolula. Into enhle ongayenza ekuqaleni kwentwasahlobo ukukhohlisa ukulamba kwindlala ngokuphuza ngakumbi ukondla ekudleni okanye nokuba endaweni yalo. Phuza i-juices ngaphezulu, i-decoctions ye-herbal, i-broths. Oku kuya kunceda ukuzalisa isisu ngaphandle kwengozi yokongeza amakhilogremu ambalwa. Ukongezelela, i-decoctions yemifuno, umzekelo, ukusuka kwinquma yama-rose, iya kukunceda ukujamelana nokukhathala nokuhlambulula umzimba ngokuqhelekileyo.
Zisebenzise amava kwimpumelelo yamandulo. Ngaba uyazi ukuba kwiintsuku zakudala abantu bakholelwa ukuba izandi zithintela imeko yethu yempilo? Abanye banokuphulukisa, kodwa abanye banokutshabalalisa ukuvisisana komzimba wethu.
Ukuba ufuna ukukhawuleza ukuphelisa uxhalaba, ukwesaba, ukuxhalabisa nokukhusela ukuvela koxinzelelo, tshela isandi esifutshane esithi "fu" ekuphumuleni.
Ukuba usebenza ngokucokisekileyo ekucoceni umzimba, uya kuncedwa ngelizwi elide "u-u-u", okwakusenziwa ngexesha lokulibazisa.
Ukuba uhamba ngokukhawuleza, zama ukuphefumula uze uthi "pho-o-oh-oh ende," ngoko uvuka ngokukhawuleza.
Isandi ngasinye sokunyanga singaphinda siphindwe kabini ngelilanga, kodwa kungabi ngaphezu kwama-3 kwiseshoni enye. Ukuba unamahloni, yenza le ndlela ngaphandle kwamangqina kwaye ukhumbule ukuba akukho mfuneko yokumemeza.
Yibani ukutya okuluhlaza.
Ngesikhathi sebusika, usenokukhathala ngokusungula izitsha ezintsha ukusuka ekukhetheni kokutya okulinganiselwe. Ngoku lixesha lokuzinikela kwaye uyeke ukupheka. Ngaphezu koko, imifuno eluhlaza kunye neziqhamo ziqukethe ezininzi iivithamini kunye nezondlo. Kwiimeko ezigqithiseleyo, unokuzibhaka, kodwa musa ukupheka okanye ukupheka.
Bhalisela isifo somzimba.
Iindlela eziqhelekileyo ziya kukunceda ukulahla iikhilogram ezingaphezulu, i-cellulite, ukuphucula ukujikeleza kwegazi kunye nentlalo jikelele. Unokwenza nokuzihlaziya. Ukwenza oku, vele uzihlambele ngeenyawo ezihlambulukileyo kunye nokongezwa komzimba okanye ukhilimu.
Khetha izicathulo ezipholileyo kunye neengubo zangaphantsi.
I-Spring yithuba elihle lokuqalisa ukuhamba kwakhona. Ukuba ebusika ungabhekisela kwiqhwa, emva kwentwasahlobo ilanga elikhanyayo kunye nemali efudumeleyo ayiyi kunceda ufumane isizathu sokuhlala ekhaya. Ukuba usichitha emoyeni omtsha ubuncinane iiyure ezimbalwa ngosuku, uya kubona indlela umgangatho wobuthongo kunye nomoya ophucula ngayo. Ukuhamba kuya kunceda ukuphelisa i-stagnation yegazi kunye nobunzima obukhulu ngexesha elinye.
Kwaye kwiimpahla ezintle kunye nezihlangu, ukuhamba kuya kuba mnandi kakhulu, ngakumbi xa ufumana inkampani enhle.
Ebusika kwakunomngcipheko ukucinga ngokuzityhalaza ngamanzi abandayo ngelixa uhleli kwindawo yokuhlambela. Kodwa ngokuqala kwamanzi kwafudumala, kwaye unokukwazi ukufumana le nkqubo inomsebenzi. Qala ngeesilwanyana ezahlukileyo kwaye uyancipha ngokukhawuleza ukushisa. Emva koko, xa ufundeka kumaqondo okushisa aphantsi, uzijwayele ukuthulula amanzi abandayo emva kokuba uhlambe. Inyanga kamva uya kuziva umahluko.
Iimvakalelo ezintle zichaphazela kakhulu imeko yethu yomzimba. Kuboniswa ukuba abantu abahlala behleka kwaye banomdla ngokubhekiselele ebomini abakwazi ukugula baze bahlupheke ngaphantsi kokudandatheka kwexesha. Ngoko ke, qinisekisa ixesha lokusebenzisa iinkampani ezihlekisayo, ubukele iinkqubo ezihlekisayo, ufunde iincwadi ezimnandi kwaye ubukele ama-comedies ozithandayo. Ngoko uya kuziva indlela yokwasahlobo kamsinya ngokukhawuleza.
Xa uzama ukuba ngumncinci, ulungele kwaye ujabule emva kwebusika obumnyama, ungadluli. Khumbula ukuba sonke sivalelwa yi-avitaminosis, nangona sikholelwa ukuba oku akunjalo. Ungazifaki ngokuzikhandla ngokwemvelo, zama ukulala ngokwaneleyo, yenza umzimba kwaye uphuze iivithamini. Ngokuncedwa kwezi zixhobo ezingenangqondo, uya kukhangeleka, ngelixa zonke ezikujikelezayo ziza kuqala ukukhawula kunye nokukhanyisa ilanga elikhanyayo, njengeentloro zokulala.
Xa ukukhathala kugqitywa phantsi
Iipropati eziwusizo zeoli yomququ
I-Phytotherapy: inkcazo, inzuzo kunye nokungalunganga
Unyango lwesifo sikashukela insipidus kunye namakhambi
Yintoni enokuyenza xa umnwe wakho unqunywe?
Izindlela zeentlanga zokutshisa amafutha kwisisu
Imijelo yegazi ebomvu emehlweni
Imithetho kunye neemfihlo zobuthongo obuhle
Kutheni amadoda adinga ukulala ngesondo?
Ioli e-Aromatic for massage
Iipropati kunye neenzuzo zejusi ye-strawberry
Iingxaki ezinkulu kumfundi omncinci
Iqoqo lamadoda yelinen evela kwi-brand eyaziwayo yam Homme Mystere
Ubunxibe bezinto eziphathekayo 2015: ukuhlaziywa kweendlovukazi zamabhinqa
Indlela yokupheka isobho esifanelekileyo
I Roses ephuma kwisitiyi
Kutheni umntwana ekhula kakuhle
Imiqulu yeenkukhu eneha
Kwenzeka ngokukhawuleza ukuphilisa ilizwi elihleli phantsi?
Isonka kwipikiniki nge ham neeshizi
UAlyona Vodonaeva uthetha ngezizathu zokuhlukana nomyeni